बाख्रापालनबाट लोभलाग्दो आम्दानी | Sagarmatha TV
बाख्रापालनबाट लोभलाग्दो आम्दानी
डडेल्धुरा । देशमा रोजगारी नपाएर लाखौँ युवा विदेशिएका छन् । आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका युवालाई डडेलधुराका यूवाले भने आफ्न गाउँमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण दिएका छन् ।
डडेलधुराका यूवाले व्यवसायिक बाख्रापालनमार्फत स्वदेशमै रोजगारी पाइन्छ भनेर मात्र देखाएका छैनन् लोभलाग्दो आम्दानी समेत गरिरहेका छन् ।
डडेल्धुरामा पछिल्लो समय बाख्रपालन व्यवसाय फस्टाउदै गएको छ । अन्य व्यवसाय भन्दा सजिलो र चाडै राम्रो आम्दानी पनि दिने हुँदा बाख्रापालन व्यवसाय यूवाको आकर्षणमा परेको छ ।
बाख्रा पाल्ने व्यवसायिक यूवाको उदाहरण बनेका छन्–मगराउका सुरेन्द्रबहादुर चन्द । जिल्लाको अजयमेरु गाउँपालिका–३ मगराउँका ३७ बर्षीया सुरेन्द्रबहादुरले ६ बर्ष अगाडीबाट बाख्रापालन व्यवसाय शुरु गरेका हुन ।
अहिले चन्दले व्यवस्थित रुपमा फर्म नै दर्ता गरेर आधुनिक खोरमा ५२ ओटा बाख्रा पालेका छन् । आकर्षक बाख्रा भएका कारण मिलन पोल्ट्री तथा बाख्रा पालन फर्म हेर्न अहिले छिमेकी जिल्ला बैतडी, बझाङ, दाचुर्ला लगायतका कृषक आउने गरेका छन् ।
व्यवसायिक बाख्रापालनबाट चन्दले बार्षिक बैङ्क व्याज तथा तीन छोराहरुको पढाई खर्च र घरखर्च कटाएर दुई लाख रुपैया आम्दानी गरिरहेका छन् ।
पाँच सदस्य रहेको परिवारमा उनले परिवारका सदस्यबाट पनि व्यवसायमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । श्रीमान–श्रीमती मिलेर बाख्राको स्याहारसुसार गरेपछि उनीहरुको व्यवसाय मजाले फस्टाएको छ ।
बाख्रापालन गर्न चन्दले अहिले २८ रोपनी गहुँ तथा मकैखेती हुने जमिनमा विभिन्न जातका घाँस लगाएका छन् । बाख्राहरुलाई चरनक्षेत्र प्राप्त भएपनि भिटामिन भएको घाँस तथा बधुवा प्रणालीमा बाख्रापालन गर्न घासँखेतीको पनि सुरुवात गरेका हुन् ।
बाख्रापालनका लागि उपयुक्त हावापानीका साथै चरिचरनका लागि प्रयाप्त जंगल क्षेत्र भएकाले बाख्रापालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ । केही वर्ष पहिलेसम्म मासुका लागि खसीबोका आयात हुने डडेल्धुराबाट अहिले भने खसीबोका निर्यात हुने गरेको छ ।
युवाहरुमा इच्छा शक्ति दरिलो भए आफ्नैभूमिमा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले पनि युवा व्यवसायीहरुलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
बेलायत प्रवेश गर्दा ५० मुलुकका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था खारेज
अचानक किन लद्दाख गए भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी
लिटल फ्लावर्स ईङ्लिस स्कुलमा तालाबन्दी
बैंकिङ कसूर मुद्दामा फरार प्रतिवादी पक्राउ
गलवान उपत्यका भारतको भएको मोदीको दाबी
काठमाडौंका एक वृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु, मृतकको संख्या ३२ पुग्यो
आज एकैदिन ७४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १५ हजार नाघ्यो
जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएपछि, ‘जनता सास्तीमा सांसद मस्तिमा’
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा पोखरामा पनि प्रदर्शन
होटल तथा एयरलाइन्स खोल्ने तयारीमा जुट्दै सरकार
नेविसंघको नेतृत्व प्रति कांग्रेस सभापति देउवा आक्रोशित
सुनको मूल्य घट्यो, कति पुग्यो ?
ओली र प्रचण्डबीच तीनघण्टा छलफल, एकताको मर्म अनुसार अघि बढ्ने समझदारी
आफ्नो समर्थनमा सडक आन्दोलन गर्न ओलीको निर्देशन
पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानमा नेकपाका नेताहरु कसले के भने ?
सिमा विवादकै विच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लद्दाखमा